China High Quality Cr1632 Cell Battery Holder ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - KeYu Plastic
CR1632 ဆဲလ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ၊ လီသီယမ်အကြွေစေ့ဆဲလ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ။
CR1632 ဆဲလ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ၏ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက် ၁
CR1632 ဆဲလ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ၊ လီသီယမ်အကြွေစေ့ဆဲလ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူများ
CR1632 ဆဲလ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ၏ 2. ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက် (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)
ထုတ်ကုန်အမည် CR1632 ဆဲလ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ
ပစ္စည်း: LCP + နွေ ဦး သံမဏိ ၃၀၁ နစ်ကယ်ချထားတဲ့
၃။ CR1632 ဆဲလ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ၏ကုန်ပစ္စည်းအင်္ဂါရပ်နှင့်အသုံးချမှု
1. ဤ CR1632 ဆဲလ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူသည်သိပ်သည်းဆမြင့်မားသောထုပ်ပိုးမှုအတွက် profile နိမ့်သည်။
CR1632 ဆဲလ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ၏ 4. ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
အခြေခံ: Glass fiber အားဖြည့် LCP, အပူခုခံ;
အဆက်အသွယ်များ: နွေ ဦး သံမဏိ ၃၀၁ နစ်ကယ်ချထားတဲ့
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: CR1632 ဆဲလ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ
CR1632 ဆဲလ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ၏ထုတ်ကုန်အရည်အချင်း ၅
ISO9001, ROHS, Dun & Bradstreet ထောက်ခံချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ CR1632 ဆဲလ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူအားလုံး
CR1632 ဆဲလ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ၏အမေးအဖြေများ ၇
ပုံမှန် CR1632 ဆဲလ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူအမျိုးအစားများနမူနာများကိုသင်အခမဲ့နမူနာရယူနိုင်ပြီးကုန်တင်ခအတွက်သာပေးချေပါ။
hot Tags:: Cr1632 ဆဲလ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ လက်ကားဝယ်၊ စိတ်ကြိုက်၊ စတော့၊ အစုလိုက်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ တရုတ်၊ တရုတ်၊ Made in China၊ စျေးသက်သက်သာသာ၊ လျှော့စျေး၊ အနိမ့်ဆုံးဈေးနှုန်း CE၊ ဖက်ရှင်၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူ၊ နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းချခြင်း၊ အဆင့်မြင့်